Ugwu - Newsway Valve Co., Ltd.
Ngwuputa na-ezo aka na mmịpụta nke mineral ndị na-ahụkarị dị ka ndị siri ike (dị ka kol na mineral), mmiri mmiri (dị ka mmanụ mmanụ) ma ọ bụ gas (dịka gas). Gụnyere ngwuputa ala ma ọ bụ nke dị n’elu ala, ọrụ nke ebe a na-egwupụta akụ, na ọrụ inyeaka ọ bụla, dịka igwe, uru na ọgwụgwọ, nke a na-arụkarị n’akụkụ saịtị ma ọ bụ saịtị iji hazie akụrụngwa, bụ ụdị ọrụ a.
NEWSWAY VALVE na-enye ihe ngwọta maka ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ ga-enyere aka melite nchekwa gburugburu ebe obibi, ọnọdụ ọrụ nke usoro pipeline, ntọala ụlọ ọrụ & ọrụ ndụ valvụ, ma belata oge nkwụsị nke mmezi.
NEWSWAY VALVE nwere ike inye ọla na mineral ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọrụ valvụ na-anọ ọdụ na-eguzogide oke nhazi gburugburu. Anyị autoclave valves nwere ihe ịga nke ọma rụrụ na slurry pipeline ngwa gafee ụwa.
Isi Ngwa ahịa:
Iron Mine erigbu na gbazee
Aluminom Ngwá Ọrụ na Nhazi
Nickel Mine na-erigbu na nhazi
Ọla kọpa m na-erigbu na nhazi
Metal Nọrọ Ball valvụ
Ot Casttọ Steel Gate valvụ